Raashiinkii ugu horeeyay oo maanta la geeyay Magaalad Xudur | Universal Somali TV
Raashiinkii ugu horeeyay ayaa maanta dhanka cirka lagu gaarsiiyay Magaalada Xudur ee Gobolka Bakool, ka dib markii maleeshiyada Al Shabaab ay go'doomiyeen dhammaanba wadooyinka soo gala magaaladaasi.
Shabaabka ayaa muddooyinkii ugu dambeysay diiday in gaadiidka xamuulka ee badeecadaha sida ay taggaan Magaalada Xudur, iyagoona wadooyinka ku gubay gaadiid raashiin u waday magaaladaasi.
Raashiinka maanta la geeyay Magaalada Xudur oo 26 tan ka koobnaa ayaa waxaa geysay Shirkadda Diyaaradaha ee Durdur, ka dib codsigii uu maalin ka hor Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) u jeediyay shirkadaha duulimaadyada.
Gudoomiyaha Gobolka Bakool, Shiine Macalin Nuurow ayaa sheegay in raashiinkan uu isugu jiro bariis, bur, sonkor iyo saliid.
Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in Durdur ay noqotay diyaaraddii ugu horeysay oo ka jawaabta codsigii Madaxweyne Cabdicasiis Lafta-gareen.
Madaxweyne Lafta-gareen oo Sabtidii gaaray Magaalada Xudur ayaa sheegay in Xudur uu u yimid arrimo shaqo, ka dib cabasho ka timid dadka deegaanka.
"Waxaan u nimid arrimo shaqo oo ku soo gaarnay Degmada Xudur oo ah Xarunta Gobolka Bakool, oo sida aad la socotaanba muddadaanba ay ka jirtay cabasho bani'aadanimo, daruuf ka timid cunaqabateyn iyo dhibaato muddo dheer ku soo socotay, laguna haayay guud ahaan dadka Gobolka Bakool degan iyo Koonfur Galbeed oo dhan, laakiin si gooni ah muddadii dambe u saameysay Degmada Xudur." Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweynaha ayaa intaa ku daray "Adeegyadii ganacsatada culeyso iyo khasaaro badan ayaa soo gaaray, laba jeer oo isku xigto ay gubteen toban iyo toddobo baabuur oo dad ganacsato ah oo reer Xudur ay lahaayen, sidaasi darteedna uu jidadkii u xirmay."
Kan-xigaGaadiid fara-badan oo ku xaniban Gobo...
Kan-horeLafta-gareen oo Saraakiisha kala hadl...
59,413,092 unique visits